LiHao Ụlọ Nkwari Akụ - Imewe Mmewe
Satọdee 16 Ọktoba 2021
Ụlọ Nkwari Akụ Laghachi n'okike, ọdụ ọdịbendị obodo. Mepụta ụdị ndụ ịla ọcha. Naanị nwee ọ enjoyụ dị jụụ. Thelọ oriri na ọ hotelụ isụ dị na mpaghara Baoding High-tech Development Zone. Onye mmebe na-akọwapụta ụlọ ezumike obodo ahụ site na echiche zuru oke site na ịhazigharị gburugburu ebe obibi, ije, ala na ime imepụta ọhere, ọnọ ọfụma na ebe obibi. Ka ndị njem azụmaahịa nwee ọganihu na nwayọ, na-ezu ohi ezumike ụbọchị nke ọkara.
Aha oru ngo : LiHao, Aha ndị na-emepụta ya : Liang Fang, Aha onye ahịa : China Han Design.
Tọọzdee 14 Ọktoba 2021
Lavazza Desea Igwe Kọfị Satọdee 16 Ọktoba
Quaint and Quirky Ime Ụlọ Cafe Fraịdee 15 Ọktoba
Aoxin Holiday Nkwari Akụ Tọọzdee 14 Ọktoba
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Satọdee 16 Ọktoba
Chepụta akụkọ mgbe ochie Fraịdee 15 Ọktoba
Nhazi nke ubochi Tọọzdee 14 Ọktoba
Onye rụrụ ụbọchị Wenezdee 13 Ọktoba
Otu mmebe nke ụbọchị Tiuzdee 12 Ọktoba
Ụlọ Nkwari Akụ Liang Fang LiHao